यो कस्तो शिक्षा हो ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७१ असार १०, मंगलवार ०२:१० गते
सर, त्यो कक्षामा केवल २ जना चेलीहरुका लागि पढाउन जाने हो– एउटा सहकर्मी साथी कानमा आएर फुसफुसाउँछ । सर, प्राइभेट भन्नुमात्रै हो, धनी बाउका छाडा छोराहरु क्यान्टिनमा बुङबुङ चुरोटको धूँवा उडाउँछन् । हुलिया पनि कस्तो, देख्दै घिन लाग्ने बनाएर आउँछन् । छ्या, छ्या, छ्या, के पढाउनु !– अर्को सहकर्मी ।
यहाँमात्र यस्तो हो त ? म मनमनै कल्पिन्छु । कुनै जमाना थियो, बरालिएका सन्तानलाई पिटेरै तह लगाइयो । मेरो कक्षामा एकदम अनुशासन र मर्यादा कायम हुन्थ्यो । म जाँगर लगाएरै पढाउने र नपढ्नेलाई जाँगर लगाएर ठटाउँथे । अब सक्दिनँ भनौँ भने केही दिनअघि म भित्रको पुरानो शेर फेरि जाग्यो र कक्षामा सीमाहीन र शब्दातीत अमर्यादित व्यवहार गर्ने रामभक्तहरुलाई मज्जैसित ठटाएँ । तर यो गौरवको कुरा होइन, पटक्कै होइन । म स्वयम् पनि त्यो हदसम्म जागिन परेकोमा सारै नमज्जा मानिरहेको छु । यथार्थमा मेरो सहजवृत्ति रमाइलो गर्ने हो, हाँस्ने हो र हँसाउने हो । रमाइलो रमाइलोमै विषयवस्तुको धारणा दिने हो ।
तर, आजको यो पुस्ता कता जाँदै छ हँ ? म आजै घोषणा गरिदिन्छु– बीबीएस प्रथम वर्षको हाम्रो क्याम्पसका विद्यार्थीहरु यदि सचेत भएनन् र सुध्रिएनन् भने १५ प्रतिशत पनि वार्षिक परीक्षामा उत्तीर्ण हुँदैनन् । यो लेखलाई क्याम्पस प्रशासनले, क्याम्पस सञ्चालक समितिले सिरानीमा राखोस् । कतै पढेको थिएँ, संसारभरिका विश्वविद्यालयहरु १५० वर्षका लागि बन्द गरिदिए
हुन्छ । यसो भन्ने पात्रले सायद भाङ–धतुरो खाएको तालमा यस्तो गुनासो गरेनन् होला । म पनि सोचिरहेछु, यी सारा झारपातलाई जबर्जस्ती पढाउनुको कुनै तुक छ ? पत्याउनुहुन्छ ? केही हतभागी केटाहरु क्याम्पसमा फगत् कस्ताकस्ता पुतलीहरु आउँछन् भनेर मात्र आउँछन् । कुनै दिन पनि पढाइमा ध्यान छैन । अभिभावकले सर्वस्व लगानी गरेको छ । सन्तान पाँच विषयको परीक्षा दियो भने ६ विषयमा फेल हुन्छ । आदरणीय पाठकहरु, धने बौलायो नभन्नुहोला ।
आजको यो शिक्षा कुनै कामको छैन । अहिले जोड दुई र स्नातक, स्नातकोत्तरमा पढ्ने छात्रछात्राहरु जति छन्, तीमध्ये ९० प्रतिशतलाई यो अनुत्पादक शिक्षाबाट अन्तै स्थानान्तरण गरी सीपमूलक शिक्षातिर लगाए हुन्छ । जुन–जुन देशमा जान खोज्छन्, सरकारले नै पठाए हुन्छ । साँच्ची नै पढ्न चाहने र पढ्नेले मात्रै पढे हुन्छ । जसरी छन्दमा हात बसेकाले मीठो छन्दको कविता लेख्छ, गद्यमा हात बसेकाले गद्य कविता लेख्छ, त्यसैगरी ज–जसलाई जे–जेमा रूचि छ सोहीअनुसारको विशिष्ट तालिम दिने व्यवस्था गरे हुन्छ । मेरो एउटा गायक चेलो छ, उसलाई राज्य व्यवस्थाले मज्जासित गायनको तालिम देओस् । किन घोक्ने उसले गणितका सूत्रहरु ? किन पढ्ने अर्थशास्त्र ? ए बाबा ठाकुरे, के काम छ यो शिक्षाको ? भिक्षा पनि नपाउने शिक्षा दिइरहेछौँ हामी ।
अचेल म पूरै उत्तरआधुनिक गुरू भएको छु कक्षामा, लाजै नमानी भन्ने गर्दछु– म सबैलाई बुझाउन सक्दिनँ । बुझ्न पाइन्छ भने नबुझ्न पनि पाइन्छ । परीक्षामा पास हुन पाइन्छ भने फेल हुन पनि पाइन्छ । पढ्न मन लाग्छ भने नलाग्न पनि सक्छ । कक्षामा ध्यान दिन पाइन्छ भने ध्यान नदिन पनि पाइन्छ । मानवअधिकार भएझैँ पशुअधिकार आयो । अब नयाँ विद्यार्थी अधिकार भएझैँ पशुअधिकार पाउनु, जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाउनु उत्तरआधुनिक विद्यार्थी अधिकार हो । चेलाचेली हो, जे मन लाग्छ त्यही गर । हात्ती नपढेर सानो भएको छ र ? मेरी निरक्षर श्रीमती नै मेरो घरको विशिष्ट श्रेणीकी प्रशासक हुन् । उनले जे–जे भन्छिन्, त्यही–त्यही नगरे म मेरो गृहबाटै निलम्बित हुन्छु । भान्सासम्म म पुग्नै पाउन्नँ । त्यही भएर कपाल खौरिएर टुप्पी राखेर जनै लगाएरै सरात् गरेँ । जब कि मेरो आत्माले भन्छ– मान्छे मरेपछि च्याप्टर क्लोज । यी शतवार्षिकी, यी स्मृति दिवस, यी सालिक, यी स्मृतिगन्थ, सब निरर्थक ! टाइम पास !
छ कुनै तुक ?
धने बौलायो, होइन त ? सात दिनमा हप्तैदिन कक्षामा पढ्न आउने एउटा गौतम बुद्ध कक्षामा कुम्भमेला भर्न आएझैँ आएर बस्छ र भन्छ– सर केही पनि बुझिएन । अलि बुझाएर पढाउनुहोस् । झनन पारा तात्नुपर्ने हो मेरो, तर तात्दिनँ म । मुसुमुसु हाँस्छु । दुर्योधनको मूर्खता देखेर देवकीनन्दन हाँसेझैँ । भन्छु– प्रिय शिष्य, मैले पढाएको बुझ्न सजिलो छैन । म त्यति सजिलोसित बुझ्नेगरी पढाउन सक्ने प्राध्यापक परिनँ । मैले पढाएको बुझ्न सर्वप्रथम तिमी विशुद्ध विद्यार्थी हुनुपर्दछ । पाठ्यपुस्तक हुनुपर्दछ । घरमा वर्षदिनमा ३६५ दिन नै पढ्नुपर्दछ । २४ घन्टामा १४ घन्टा लेखपढमै बिताउनुपर्दछ । नजानेको कुरा हाताहाती अर्को दिन सोध्नुपर्दछ । पाठ्यपुस्तकभित्रका हरेक उदाहरणहरु अक्षरशः
हेर्नुपर्दछ । गणितका विशिष्ट नियम र सूत्रहरु कण्ठ हुनुपर्दछ । त्यसै बुझिन्छ र ? किन द्रोणाचार्य र अर्जुन अमर हुन्थे ? यो संसारमा कलेज जाने १० प्रतिशतले पनि पढाइमा जाँगर लगाउँदैनन् । म तिमीलाई बुझाउन भनेर जन्मिएको होइन । मलाई आदर्शवाद राम्रो लाग्थ्यो । अचेल यथार्थवादको पक्षपाती भएको छु । यथार्थमा म पढ्नेहरुलाई मात्र पढाउन सक्छु ।
विजयकुमार पाण्डेले लेखे, नारायण गोपाल दाइ भन्नुहुन्थ्यो– गीत गाउन गीत गाउनैपर्छ । म पनि भन्छु– गणित बुझ्न गणितको समस्या हल गर्नैपर्दछ । थाहा छ मलाई, धेरैले मेरा कुरा एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाउँछन् । तर, म हरेस खान्नँ र भन्न
छोड्दिनँ । मलाई थाहा छ, एउटा असल र योग्य मान्छे मौन बस्ने भनेको धेरै खराब र अयोग्यहरुको मनोबल बढ्ने हो । झन्डै ३०० जना चेलाचेलीसित ४ वटा कक्षामा हरेक दिन साक्षात्कार हुन्छ । ३०० जनालाई नै सुधार्दै मेरो विषयमा उत्तीर्ण गराउँछु भन्दिनँ म, सक्दिनँ पनि । तर, यी ३०० जनामध्ये ३० जना अथवा १० प्रतिशतले मेरो अन्तरमनको भाव बुझेर असल नागरिक बने भने म आफूमात्र होइन, मेरो संस्थाको जीवन र लगानी सार्थक भएको ठान्दछु । गन्धे झारलाई तुलसी बनाउने दुस्साहस गर्दिनँ म । सायद, यो मेरोमात्र समस्या होइन । यो जिल्लामा, यो देशमा, यो संसारमा असल गुरूहरु, योग्य गुरूहरु, गुरूआमाहरु धेरै हुनुहुन्छ । उहाँहरु एकान्तमा रूनुहुन्छ । म पत्रिकामा ठोकिदिन्छु । फरक यत्ति हो । आज म राजनीतिलाई छुन्नँ । राजनीति बिचरो आफैँ रक्तक्यान्सरले ग्रसित छ, आफैँसित त्रसित छ । मरेको साँपलाई किन लाठीले हिर्काउने ? अब देश बनाउन, समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउन, शिक्षण संस्थाहरुका बारेमा, नयाँ पुस्ताका बारेमा फेदैबाट सोच्नुपर्ने समय आएझैँ लाग्दछ । म अलि निराश भएँ कि ? हरेक दिन जनताका छोराछोरीहरुलाई गाली गर्न मन लाग्छ र ? शान्त वातावरणमा अनुशासित, मर्यादित, अध्ययनशील, लगनशील, गुणग्राही, शालीन र सभ्य चेलाचेलीलाई पढाउने रहर यो जुनीमा पूरा नहोला त ? यो पनि नेपाली जनताले संविधानको आश गरेजस्तै हो ? कसैले सुन्ला ?